Ogaden News Agency (ONA) – Xoghayaha Midawga dhalinyarad iyo Ardayda Ogadenya OYSU loo doortay
Posted by ONA Admin	/ January 1, 2017
Waxaa shalay ladoortay Xoghayaha guud ee UYSU Shaafi Sheekh Abdi Shilaabo.
Wuxuu dhashay 1990 gobalka Hiiraan, Somalia. Waxuuna ku Soo barbaaray Ogadeniya gaar ahaan magalada Shilaabo oo uu ku soo qaatay waxbarashada dugsiga quranka iyo School ka Dugsiga hoose. wuxuu u soowareegay sanadii 2001 jigjiga oo ku sooqaatay waxbarashadiisa dugsiga dhexe. Wuxuu kamid ahaa dhalinyaradii ka shaqeenaysay gudaha Ogadenia mudadii uu joogay Jigjiga. kadib wuxuu usoo kicitamay oo yimid wadanka Maraykanka sanadii 2006. Shilaabo wuxuu ku dhameeystay Goabalka Minnesota dugsigiisa sare. wuxuu aaday oo waxbarashada General classes ka kaqaatay Minnesota State Colllege of Moorhead. wuxuu hada ka diwaangashanyahay oo wali uu wadaa Jamaca Metropolitian State University.
Shilaabo wuxuu ka soo shaqeeyay qeeybna ka ahaa maamulkii Ururka dhalinyara OYN looyaqaanay ee North America wuxuuna ahaa Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Bulshada OYN North America. wuxuu qeeyb ka ahaa dhalintii u istaagtay sidii loo mideeyn lahaa dhamaan ururadii dhalinyarada Ogadenia ee daafaha dunida kala joogtay.
kadib markii la mideeyay dhalinyarada loona sameeyay haldalad oo lamagacbaxday OYSU.
Shilaabo wuxuu noqday Kuxigeenka Xoghayha Guud OYSU ahna Afhayeenka Guud ee OYSU xilkaas wuxuu hayay sanadii 2010 ilaa 2013. Shirweeynihii 2aad ee OYSU markuu dhacay kadib waxaa Shilaabo uu noqday Xidhiidhiyaha OYSU ee qaarada North America xilkaas wuxuu hayay 2013 ilaa wakhtigan la joogo oo loo doortay Xoghayaha Guud ee OYSU.
Shaafi waxuu kamid yahay dhalin yarada ku barbaartay halgaka lagu xoreeynayo Ogaadeenya waana Xubin farinfircoon oo soo jiiso leh;
Waxaan Allaha Awooda leh uga baryaynaa in uu masuuliyadaa loo doortay ku guuleeyo.